Home » Lahatsoratra farany farany » Zon'olombelona » Amin'ny Pipe iray, amin'ny Pigeon Shed: Izay onenan'ireo tsy manan-kialofana
Kolontsaina • Zon'olombelona • Vaovao • Tourism • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Toerana onenan'ireo tsy manan-kialofana
Betsaka ny olona tsy an'asa sy ny maro no tara ao amin'ny hofan-trano na ny trosa arahin'antoka, lasa tsy fahita firy intsony ny tsy fananan-trano noho ny areti-mandringana COVID-19.
Ho an'ireo tsara vintana, ireo izay mahita fa tsy manan-kialofana izy ireo dia afaka hipetraka miaraka amin'ny mpianakavy ao an-tranony.
Ho an'ireo izay tsy misy toeran-kafa aleha dia misy fialofana, saingy voafetra be ny toerana.
Ka ireo nahita ny tenany teny an-dalambe dia nahita fomba tokana hiatrehana ny tsy fisian'ny fialofana.
Angamba ny trano fonenana vonjimaika mahazatra indrindra dia ny lay. Mitsimoka toy ny vondrom-piarahamonina kely eny amoron-dalana sy eny amin'ny valan-javaboary izy ireo, raha maniry haingana toy ny holatra mandritra ny alina. Tanàna maro no manao "mamafa" sy manery ireo tsy manan-kialofana hiala, vao mahita tobim-panafenana vaovao nafindra any an-kafa ny ampitso. Lalao tsy tapaka amin'ny famolavolana ny dice sy ny fivezivezena manerana ny lalao lalao Monopoly momba ny tsy fananan-kialofana.
Eo ambanin'ny tetezana dia toerana mahazatra ny tsy manan-kialofana manangona ary matetika manana vondron'olona be pitsiny. Manampy amin'ny fialofana eo ambonin'ny toetr'andro izany ary tsy ho hitan'ny mason'ireo tsy manan-kialofana. Maromaro amin'ireo toerana ireo no tobin'ny toby kely, izay toeram-ponenana ho an'ny olona an-jatony vitsivitsy.
Ao anaty fiaranao
Ho an'ny ankamaroan'ny tsy manan-kialofana dia mbola manana ny fiarany izy ireo ary mipetraka ao. Ny fiainana ao anaty fiara dia antsoina hoe Vehicle Homelessness, ary mitombo ny tanàna any Etazonia. Misy olona mihoatra ny 16,000 monina ao anaty fiarany any Los Angeles, Kalifornia, irery.
Any amin'ny tanàna sasany dia nisy lalàna nolaniana hiadiana amin'ny tsy manan-kialofana avy matory alina ao anaty fiarany. Tanàna hafa manana fo tsara fanahy no miasa amin'ny fijanonan'ny olona amin'ny alina hatory ao anaty fiarany. Ny tsenan'ny tsaho dia milaza fa i WalMart dia afaka mamela heloka mandritra ny alina ao amin'ny toeram-piantsonan'izy ireo.